Maxaabiista oo xabsiga ka jecel birta lugta | Somaliska
Maxaabiista lagu xiro dalka Iswiidhan ayaa waxay door bidaan in ay xabsi galaan intii lagu xiri lahaa birta elektrooniga ah ee u suurto galinaysa in ay gurigooda joogaan balse aysan ka bixi karin halka ay ku nool yihiin. dad ka badan 5000 ayaa loo soo bandhigay in lagu xiro birta elektrooniga ayadoo in ka badan 3000 ay dooratay balse markii dambe boqolaal ay xabsiga ka doorteen. Birta elektrooniga ayaa sidoo booliiskka u suurto galisa in ay qofka maxbuuska ah kala socdaan xaruntooda hadduu ka baxo meesha loo cayimay. Maxaabiista Iswiidhan ayaa waxaa la siin karaa in ay kala doortaan in ay xabsi galaan ama lagu xiro birta elektrooniga haddii xabsigooda uu ka yaryahay 6 bilood ama qofku uu horay xabsi dheer u soo maray. Si qofka loogu ogolaado in lagu xiro birta elektrooniga waxaa laga doonayaa in uu haysto guri , telefoon iyo shaqo ama iskuul.
Maxaabiista lagu xiro dalka Iswiidhan ayaa waxay door bidaan in ay xabsi galaan intii lagu xiri lahaa birta elektrooniga ah ee u suurto galinaysa in ay gurigooda joogaan balse aysan ka bixi karin halka ay ku nool yihiin.
dad ka badan 5000 ayaa loo soo bandhigay in lagu xiro birta elektrooniga ayadoo in ka badan 3000 ay dooratay balse markii dambe boqolaal ay xabsiga ka doorteen.
Birta elektrooniga ayaa sidoo booliiskka u suurto galisa in ay qofka maxbuuska ah kala socdaan xaruntooda hadduu ka baxo meesha loo cayimay.
Maxaabiista Iswiidhan ayaa waxaa la siin karaa in ay kala doortaan in ay xabsi galaan ama lagu xiro birta elektrooniga haddii xabsigooda uu ka yaryahay 6 bilood ama qofku uu horay xabsi dheer u soo maray.
Si qofka loogu ogolaado in lagu xiro birta elektrooniga waxaa laga doonayaa in uu haysto guri , telefoon iyo shaqo ama iskuul.
Maxkamada Midowga Yurub oo laga yaabo in ay wax ka badasho heshiiska Dublin